WAR CUSUB:Kuuriyada Waqooyi oo Maraakiib Dagaal Usoo Dirtay Badi Kenya Soomaaliya Kula Muran Sanayd,Si’Ay Soomaaliya u Caawiyaan – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeUncategorizedWararka maantaWAR CUSUB:Kuuriyada Waqooyi oo Maraakiib Dagaal Usoo Dirtay Badi Kenya Soomaaliya Kula Muran Sanayd,Si’Ay Soomaaliya u Caawiyaan
August 14, 2019 marqaan Wararka maanta 2
Dowladda Koofurta Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in ay Markab Ciidan iyo diyaarado dagaal wada u soo direyso biyaha SOomaaliya.
Waxaa ay dowladda Kuuriya sheegtay in ciidankaas ay qeyb ka noqonayaan la dagaallanka burcad badeedda biyaha Soomaaliya ka jirta.
Waxaa kale oo jira warar sheegaya in Markabkaasi uu qeyb ka yahay ciidamada Gacanka Hurmuz ee uu isku dubbaridayo Mareykanka si ay uga hortagaan dowladda Iraan.
Markabka ayaa waxaa uu xalay ka soo baxay Magaalada Busan ee koofurta Dalka Kuuriya waxaana lagu wadaa in uu biyaha Soomaaliya soo gaaro talaadada maanta ah sida ay sheegtay dowladda Koofurta Kuuriya.
Markabka oo lagu magacaabo Kang Gam Chan, waxaa uu culeyskiisu dhanyahay 4,400 oo tan,waxaana uu wadaa noocyada kala duwan ee ciidanka Badda Koofurta Kuuriya sida kuwa quusa, kuwa biyaha ka dhex dagaallama, kabtannada iyo qeybaha kale ee Ciidanka Badda Dowladda Koofurta Kuuriya.
Waxaa uu biyaha SOomaaliya joogayaa muddo lix bilood ah oo ka billaabaneysa Bisha September ee sanadkan.
Ciidamada Badda ee Koofurta Kuuriya ayaa ka mid ah isbaheysiga Caalamiga ah ee la dagaallanka Burcad badeedda Soomaalida waxaana ay ka mid tahay Waddamada ay Ciidamada ka joogaan Biyaha Soomaaliya
Marqaan media maanta waxiina marqaan ka badan. Madaxa aya buuxsateen. 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣
Qoraaga maqaalku wuxuu isku qaldayaa kuuriyada waqooyi iyo kooriyada koonfureed.
Bal akhriya maqaalka ma wuxuu fahmi waayay intaadan maqaalka daabicin akhri oo sax wixii khalad ah.